Waa kuma korneylka Soomaaliyeed ee lagu eryanayo dalka Mareykanka? | Berberanews.com
May 15, 2019 | Published by: Maax
Telefishinka CNN-ta ee dalka Mareykanka aya barnaamijka THE LEAD ku baahiyay warbixin lagaga hadlayay qofka uu yahay Yuusuf Cabdi Cali oo ku magac dheer Kornayl Tuke.
Barnaamijkan oo ciwaan looga dhigay waa kuma ‘Qofka ku qaadaya’ oo laga soo xigtay shaqadii ugu danbaysay ee uu Korneyl Tuke ka hayay CNN ayaa warbixintii ay baahiyeen ciwaan uga dhigay waa kuma “Qofka ku qaadaya”?.
Dhacdadan ayaa horseeday in eedaymo loo jeediyo shirkada Tagaasida ee Uber oo lagu eedeeyay in baaritaan qotodheer aysan ku sameynin dadka ay shaqaaleysiineyso.
Dacwadda la xiriirta kiiskan oo in muddo ah soo jiitameysay ayaa si rasmi ah uga furmaya maxkamad ku taala Mareykanka, sida ay shaaciyeen wargeysyada kala ah The Guardian iyo New York Times ee kasoo kala baxa dalalka Ingiriiska iyo Mareykanka.
Farxaan Warfaa oo kamid ah dadka ku marqaati kacaya Kornayl Tuke ayaa sheegay in markii ugu dambeysay ee uu la kulmo ay ahayd bishii Maarso ee sanadkii 1988-kii.
Wuxuu sheegay in Korneyl Tuke uu bastoolad ula soo baxay, kuna dhuftay shan xabadood oo uusan u meel dayin, balse uu ka badbaaday.
Ka hor inta aan la tooganin ayuu sheegay in jirdil loo geystay, isagoo xilligaasna ku sugnaa deegaannada Somaliland.
Sidoo kale gobolka Virginia ayaa waxa hore loogu maxkamadeeyay marxuun Maxamed Cali Samatar oo markii danbe lagu xukumay magdhow gaaraya 21 milyan oo doolar, lacagtas oo uu sheegay in aanu bixin karin.
Waqooyiga Mareykanka waxa ka jira ugaarsiga lagu hayo saraakiishii milateriga ee dolwaddii Siyaad Barre, kuwaa oo loo haysto in ay gaysteen gabood falo lagu la kacay dad Soomaaliyeed.
oo ahayd taksiile.
Haddaba waa Kuma Kornayl Tuke?
Kornayl Tuke waxa uu ka mid ahaa saraakiishii ciidankii qaranka Soomaaliya ee dowladii Maxamed Siyaad Barre madaxda ka ahaa ,Kornaylka wuxuu kamid ahaa sarakiil tababar fiican kusoo qaatay dalka Maraykanka sida uu sheegay qareenkiisa Joseph Peter.
Horaantii buburkii Dolwaddii Kacaanka, Tuke wuxu kamid noqday saraakiil sar sare oo qoxootinimo isaga dhiibay wadamada reer galbeedka, gaar ahaan dalka Canada oo dowladda dalkaas ay muddo kadib ogaatay in loo haysto eedeymo la xariira gobood fallo.
Kornaylka ayaa waxaa uu u wareegay wadanka Maraykanka, kadib markii warbaahinta CBC ee Canada ay baahisay barnaamij lagu soo bandhigay gabood falada loo haystay, waxaana qaabka uu ku tagay dalka Maraykanka ka danbaysay xaaskiisa oo Visa ama dal ku gal usoo dirtay markii ay heshay dhalashada Maraykanka sannadkii 2006.
Xaaskiisa ayaa sidoo kale loo haystay ka been sheegidda qaabka ay ku tagtay Mareykanka.
Dadkii daba tagnaa kornayl Tuke ayaa dacwaddiisa u wareejiyay dalka Mareykanka, waxaana warbaahinta CNN ay sidoo kale baahisay muuqaal la duubay sanadkii 2016, kaas oo muujinaya booliska Maraykanka oo Kornaylka ka kaxaynaya goobtii uu ka shaqaynayay oo ahayd garoonka caalamiga ah ee Dulles ee waqooyiga Virginia.
Tallaabada booliska ayaa timid, kadib markii xubin katirsan Aqalka Virginia ay dalbatay in la cadeeyo sababta qof dambi loo haysto looga shaqaalaysiiyay garoonka diyaaradaha ee gobolkaasi, waxaana ay keentay in shaqada laga eryo.
Wariye katirsan telefishenka CNN oo dabagal ku sameeyay kornaylka ayaa warbixantan kusoo bandhigay muuqaal muujinaya isagoo raacaya taksi uu waday kornaylka oo ka diiwaan gashan shirkadda takaasida ee Uber, waxaana taas ay keentay in shirkada ay shaqada ka eriday Kornayl Tuke oo 18 kii bilood ee u danbaysay uu ka shaqeynay.
CNN ayaa warbixintii ay baahiyeen ciwaan uga dhigay waa kuma “Qofka ku qaadaya”?.